स्ववियु निर्वाचन र हाम्रो कार्यभार - Baikalpikkhabar
स्ववियु निर्वाचन र हाम्रो कार्यभार
आगामी फाल्गुन १४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चुनावको तयारी गरीरहेको समाचार बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएसंगै फेरी एकपटक नेपालको राजनिति तातिन सुरुभएको छ । यो पटक त्रिविलाइ जसरीपनि चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २०७३ सालमा करिब २ सय ८० वटा क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको भियो । करिब ४ सयवटा क्याम्पसमा बिगत ११ बर्षदेखी स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याँकलाइ हेर्दा देशभरीमा आँगीक र सम्बन्धन प्राप्तगरी ११ सय भन्दाबढी स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पसहरु छन । गत ७३ मा चुनाव भएका कलेजहरुमा पनि गत बर्ष त्रिविले चुनाव गराउन नसकेपछी यहि फागुन १३ गतेसम्मकालागी म्याद थपेको थियो । यदी आगामी १४ गते फल्गुनमा चुनाव नगराउने हो भने कानुनीरुपमा स्ववियु नै खारेज हुने अबस्था आँउदै छ । तर्सथ जसरीपनि यो पटक त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउने देखीन्छ ।
स्ववियु अर्थात स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन , यो क्याम्पसका सम्पर्ण विद्यार्थीहरुको साझा संस्था हो । विद्यार्थीहरुका समस्या र क्याम्पसमा अध्ययनताका आइपर्ने प्रशाशनिक र अन्य जटीलताहरुलाइ सहजिकरण गर्दै विद्यार्थीहरुलाइ समस्यमुक्त बनाउनु यसको आधारभुत कार्यभार रहन्छ । साथसाथै कलेजमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको पढाइ संगसंगै अतिरिक्त क्षमता विकासकालागी बिभिन्न चेतनामुलक गतिबिधि गर्नु यसको अर्कोकार्यभार हो ।
तर हामिले बिगतको १ दशकदेखीको अभ्यासलाइ नियाल्ने हो भने, स्ववियु नामको यो संस्था आम विद्यार्थीहररुको पहंूच भन्दा धेरै माइल टाढा रहेको छ । प्रतक्ष्य दलीय निगरानी र निर्देशनमा चलीरहेको यो संस्थाको कार्यभार र भुमिकाको बारेमा आम विद्यार्थीहरुलाइ सामान्य जानकारी सम्म रहंदैन । स्ववियुको नेतृत्वगर्ने व्यक्तीहरु दलगत र आफ्नो ब्याक्तीगत स्वर्थभन्दा माथी उठ्न सकिरहेका छैनन् । कलेजका आम विद्यार्थीका समस्यामा केन्द्रित हुनु भन्दा क्याम्पसमा हुने दलिय भागबण्डा र बिभिन्न परयिोजनाका लागी क्याम्पसले खुलाउने टेण्डरमा मात्रै उनिहरुको ध्यान गैरहेको छ । एउटा स्ववियुको निर्वाचित अध्यक्षले आफनो कार्यकाल सकींदा की घर की घडेरी नत्र एउटा राम्रो कम्पनिको बाइक त जोड्छ नै । यसको बारेमा ति तमाम विद्यार्थीहरुलाइ सुंइको सम्म पनि थाहा हुन्न , स्ववियु र कलेजका विद्याथीहरुविचको दुरी यति टाढा छ की एउटा सामान्य विद्यार्थी आफैंले भोटहालेर चुनेको पधादीकारी लाइ भेट्न उसको दलको कुनैतहको कार्यकर्तलाइ चिया नास्ता खुवाउन बिवस छ । त्यतिमात्रै होइन यदी कुनै विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता र अबस्थाले कुनै प्रकारको छात्रवृती पाइहाल्यो भने तोकीएको प्रतिसत र बेलुकाको सोमरस बसाइको बिल तिर्न उ बाध्य छ । बिगतदेखीको यो खालको क्रियाकलापले आम विद्याथीहरु माझ स्ववियु भनेको यस्तै हो भन्ने भावना जर्बजस्त स्थापित गराइदिएको छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा आम विद्यार्थीहरुमा राजनिति प्रति नै बितृष्ण जागृत हुंदै आएको छ । यसरी भ्रष्टाचार बेतिथि र अपारदर्शीताको अखडामा रुपान्तर भएको स्ववियु केही दलका केही नेता र तिनका आसेपासेको कमाइ खाने भाँडोकोरुपमा परिणत भएको छ । यस्तै कारणहरुले गर्दा वेलाबखतमा बौद्धीक तप्काबाटै स्ववियुको काम छैन यसलाइ खारेज गरे हुन्छ भन्ने खालका बहसहरु पनि हुनेगरेका छन ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा शसक्त वैकल्पिक शक्ती हो भनिरहँदा हामीले स्ववियु निर्वाचन , निर्वाचन प्रणाली र स्ववियुको आगामी कार्यभारको बारेमा आम विद्यार्थी र शैक्षिक जगतलाइ हाम्रौ धारणा प्रस्ट गर्नै पर्छ । जल्दोबल्दो नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन बिर्सजनको संघारमा रहेको कुरा त हाम्रासामु घाम जस्तै छर्लंग रहेको छ । समकालीन बिद्यार्थीआन्दोलन , त्यसको नेतृत्वगर्ने नेताहरु र नेपालको लोकतन्त्र , शुसाशन ,पहिचान, समावेशीता र समानताका पक्षमा उनिहरुको दर्बिलो अनुपस्थितिले पनि यो कुरालाइ थप पुष्टी गर्दछ । यसकारणपनि वैकल्पीक शक्तको रुपमा उदाएको समाजवादी विद्यार्थी युनियनले स्ववियु लाइ विद्यार्थी हकहितको वकालत गर्ने ठाँउको रुपमा नलीइ सिँगो मुलुकको राजनैतिक ,आर्थीक ,सामाजिक ,साँस्कृतिक तथा समग्र र्शैक्षिक रुपान्तरणको क्रान्तिकारी मुद्धाको रुपमा लिनु पर्दछ ।
चुनाव हुनेकुरा ठुलो होइन तर त्यो चुनावले आम नेपाली विद्यार्थीहरुलाइ के दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रोलागी महत्वपुर्ण हुनुपर्छ । चुनाव त विगतमा पनि भएकै हुन तर ति चुनावले कस्ता ब्याक्तिलाइ नेता बनायो ,र ति नेताहरुले स्ववियुलाइ के बनाए भन्ने चाँही हाम्रो मुख्य चासो हुनुपर्दछ । बिधि पद्धति र प्रक्रिया भन्दा ब्याक्ती नै हावी हुने त्यस्तो र्निवाचन बिधिलाइ हामीले कसरी बिस्थापित गर्ने हाम्रो चिन्ता त्यता हुनुपर्छ । त्यस्तै कुन र्निवाचन बिधिबाट स्ववियुलाइ र्साभौम ,आमविद्यार्थी संगको दुरी घटेको , सबै समुदायका विद्यार्थीहरुको प्रतिनिधित्व भएको र साँचो अर्थमा कलेजका विद्यार्थीको भावना बुझ्ने बनाउन सकिन्छ त्यतातिर बहस गर्ने हो ।
अर्कोकुरा अहिलेको परम्परागत स्ववियुले दलगत स्वार्थ ,अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाइ संस्थागत गरिरहेको छ । यसले आम विद्यार्थीमा राजनितिप्रति निरासा र कुण्ठा बाहेक केही दिएको छैन । स्ववियुलाइ यस्तो गलत संस्कारको दलदलबाट मुक्त गराएर आम विद्यार्थीलाइ सामाज रुपान्तरको मुख्य गन्तव्य भनेको राजनितिनै हो भन्ने भावनाको संचार गराउदै , स्ववियुको भुमिकाको बारेमा नयां बहस श्रृजना गर्नु समाजवादी विद्यार्थी युनियनको महत्पुर्ण कार्यभार हुनुपर्छ । बिघटनको अबस्थामा पुगेको विद्यार्थी आन्दोलनलाइ उठाएर भाबी पुस्तालाइ पुन एक पटक बिद्यार्थी आन्दोलनमा आप्mनो राजनितिक भबिष्य छ भन्ने सुृनिश्चितता को अनुभुति हामिले नै गराउन पर्दछ ।
स्ववियु चुनाव हुने भनेको विश्व विद्यालय र त्यस माताहतका क्याम्पसहरुमा हो । विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सबै हिसाबले बिश्वका जुनसुकै कुनाका विद्यार्थीहरु संग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन भन्ने मान्यता रही आएको छ । अहिले विश्व व्यापीरुपमा पहिचान, समावेशीता ,समानता र सम्वृद्धीको मुद्धा ज्यादै पेचिलो रुपमा अगाडी आएको छ । देशको उन्नति र सहि अर्थमा समाजको रुपान्तरणका गाली यि मुद्धाहरुको छिनोफनो अनिवार्य सर्त नै हो । तर्सथ यि बिषयहरुमा स्ववियुले आफ्ना कलेजका विद्यार्थीहरुमा पेचिलो ढँगले बहसलाइ उठान नगरे सम्म हाम्रो जस्तो भाषिक , सामाजिक , साँस्कृतिक , धार्मिक बिबिधता र जातिय ,भाषिक, लिँगीय बर्गीय तथा बर्णीय उत्पीडन रहेको मुलुकमा समाजवाद आउनेकुरा कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ । तर्सथ यस्ता पेचिला बिषयहरुको बारेमा हरेक विश्वविद्यालय, र क्याम्पसका प्रत्येक कक्षाकोठाहरुका तातो बहस हुन जरुरी छ । यस्ता बहसहरुको उठान अब हरेक स्ववियुहरुले गर्नुपदछ । त्यसको जर्बजस्त पहलकदमी गर्नु समाजवादी विद्यार्थी युनियनको स्वभाबिक र नियमित कार्यभार हुनुपर्छ । तव मात्रै समुन्नत संघिय समाजवादको आधार तयार हुन्छ ।
सोमबार, १४ पुष, २०७६, साँझको ०५:२१ बजे
लेप्चा जातिको चिनारी र शंक्षिप्त इतिहास
सरकारले लोपोन्मुख जातिहरूको रूपमा सूचीकृत गरेकोमध्ये एक जाति हो लेप्चा । लाप्चा, लेप्चा वा लाप्चे भनेर सम्बोधन गरिने जातिको मौलिक नाम भने ‘रोङ’ हो । उनीहरू एक आपासमा संवाद गर्दा ‘रोङ’ भाषाको प्रयोग गर्छन्। पूर्वी इलाम जिल्लाका इलाम नगरपालिका, सुर्योदय
नमस्ते कि नमस्कार ?
‘नमः’ को शास्त्रीय अर्थ हो–जोडिएका दुई हात निधारमा पु¥याई शिरलाई अलिकति झुकाएर गरिने अभिवादन । जसलाई सामान्यतः नमनः, प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, प्रणति आदि भन्ने गरिन्छ । नमस्तेमा उत्तरोत्तर विशिष्टता थपिँदै जाँदा क्रमशः पादस्पर्श र साष्टाङ्गदण्डवत् हुन्छन् । यही नमस्
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र ध्यान दिनु पर्ने पक्ष
सुवास श्रेष्ठ नेपालको संवधिानले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय
नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनुहुँदैन : बाबुराम भट्टराई
पच्चीस लाख रुपैयाँ लगानीबाट कस्ता–कस्ता काम गर्न सकिन्छ ?
कृष्णराज तिमल्सिना सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही लोकप्रियता कमाउने खालका विषय पनि समेटेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो स्नातक उत्तीर्ण युवाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने
संसद विघटन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो
विमलकुमार संग्रौला पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी लामो समयदेखि झापा जिल्लामा निरन्तर सक्रिय कानुन व्यवसायको क्षेत्रका एक अनुभवी र ज्ञाता पनि हुन् । उनै अधिवक्ता संग्रौलासंग देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा पूर्वसन्देशले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । –वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा
सरकारले लोपोन्मुख जातिहरूको रूपमा सूचीकृत गरेकोमध्ये एक जाति...
‘नमः’ को शास्त्रीय अर्थ हो–जोडिएका दुई हात निधारमा...
सुवास श्रेष्ठ नेपालको संवधिानले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र...
बाबुराम भट्टराई ...
कृष्णराज तिमल्सिना सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९...